Maan-gaabnimada Khawaarijta: Falanqeyn Fiidiyowgii Shabaabka ee YouTube. W/Q Cabdullaahi Janno | RBC Radio
Maan-gaabnimada Khawaarijta: Falanqeyn Fiidiyowgii Shabaabka ee YouTube. W/Q Cabdullaahi Janno	Posted on June 30, 2017
Maqaal, RBC, Wararka
Maan-gaabnimada Khawaarijta: Falanqeyn Fiidiyowgii Shabaabka ee YouTube
2—Nin kale oo Ibraahim lagu magacaabo oo isaguna af-Soomaali ku hadlayay ayaa hadal faan ku dheehan ku yiri markii lala dagaallamayay ciidankii Mareykanka ee Xamar waxaynu aheyn rag yaroo mujaahidiin ah. Waxa aynu billawnay xabbadda innagoo ka faa’iideysanayno in shacabka Xamar joogo ay nagu soo biiri doonaan oo ay dagaalka soo geli doonaan. Wuxuu yiri, “Wax billaabo un oo isku daba rido un ayay Soomaalidu markaa la’eyd’.” Wuxuuna xusay in isku dhacaas ay iyagu horseedeen isagoo leh, “Billawgeeda ayuu Ilaah sabab nooga dhigay,” eeg daqiiqadda 35:00 ee fiidiyowga.
3—Nin kale oo Cumar Dheere lagu magacaabo ayaa af-Soomaali ku hadlay. Waa ninka soo sahmiyay kaniisad qubuuro u aheyd Talyaaniga. Waa tii isaga oo kaashanayo rag uu ku jiray Aadan Ceyrow ay go’aansadeen in ay soo qufaan qabuurihii. Halkaas ayayna ka dhigteen sal-dhiggii u horreeyay ee al-Shabaab ka hawl-gasho. Cumar Dheere wuxuu isagoo isu qabo inuu Islaamka wax tarayo yiri, “Ilaah mahaddii, maanta in la burburiyayna waa wax Ilaah loogu mahdiyo…booskan weyninka badnaa ee maqbarada ugu weyneyd ee gaalada Talyaaniga…. Aannu rajeynayno runtii in een loo rogo een dhismo weyn oo Islaami ah—markaz Islaami ah,” eeg saacadda 1:04 ee fiidiyowga.
Wuxuu ina Godane yiri, “Cumar Dheere wuxuu soo sahmiyay…qabuurihii talyaaniga…. Fikraduu keenay oo wuxuu yiri meeshan aan degno. Raggii….markii hore way yar ka degi weyday.” Waxaa dhalatay dood. Siduu ina Godane xusay, raggii qaar baa yiri, “Seen u degaynaa meeshan?” Dooddii waxaa ku guuleystay garabkii Cumar Dheere iyo Aadan Ceyrow, waxayna ku baaqeen, “Qabuuraha aan baabi’inoo Ilaah aan ugu dhowaanno. Xarun la’aan baaba na dishayee xarun aynu ka dhiganno. Arrintiiyaa la qaatay.”
Midda aniga YAQYAQSIGA ila noqotay waxay tahay—MARKHAATI cadna u ah fiiro-gaabnimada iyo maan-gaabnimada khawaarijta—hadalkii ahaa, “Qabuuraha aan baabi’inoo ILAAH AAN UGU DHAWAANNO.” Sidee buu qof Muslim ah ugu hammin karaa in uu qabuuro kaniisadeed ka dhigto sal-dhiggii u horreeyay ee uu diinta Islaamka uga adeegayo?!! Subxaanallaah!! Fool-xumo badanaa fikirkaas!! Anshax-xumaa khawaarijtu!!